APK Google ကင်မရာကိုမည်သို့ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရမည်နည်း Androidsis
Francisco Ruiz | | APK, Android application များ, ဓာတ်ပုံ, လဲ tutorial
ဒီဗွီဒီယိုပို့စ်အသစ် (သို့) လက်တွေ့ကျသော Android ဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာဘလော့ဂ်ရဲ့မှတ်ချက်များကနေတဆင့်ဘလော့ဂ်ကိုတောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးကြောင့်၊ Androidsis you tube tube ပြီးတော့ငါတို့တက်ကြွစွာပါ ၀ င်တဲ့မတူညီတဲ့လူမှုကွန်ယက်တွေကနေဒီနေ့ကိုဘယ်လိုသင်ပြမလဲ google ကင်မရာကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ Play Store သို့မဟုတ် Google Play ကိုတရား ၀ င် Google Store တွင်ရှာမတွေ့ပါ။
ဒီဟာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းမှကျိုးကြောင်းဆီလျော်သလိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ် manual Google ကင်မရာတပ်ဆင်ခြင်းအတွက် apk။ သင်၏ Android ဗားရှင်းနှင့်သင်၏ Android terminal ၏ဗိသုကာအရ 32-bit လား၊ 64-bit လားဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်မှန်ကန်သော apk သည်မည်မျှဖြစ်သည်ကိုသင်သိလိုလျှင်၊ ပူးတွဲပါဗွီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်ပြောသောအရာများကိုလက်လွတ်မသွားသင့်ပါ။ ငါတို့သည်ဤစာမူစတင်ခဲ့ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်ကလစ်နှိပ်ပါရန်သင့်အားဖိတ်ကြားသည် «ဤစာကိုဆက်ဖတ်ပါ။ သင်၏ Android ဗားရှင်းနှင့်၎င်း၏ဗိသုကာအတွက်ရရှိနိုင်သည့် apk လင့်များကိုရယူရန်။
1 ကျွန်ုပ်၏ Android တွင်ဂူဂဲလ်ကင်မရာကိုအဘယ် apk တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
2 သင်၏ Android အရ APK Google Camera ကို Download လုပ်ပါ
2.1 Android 7.1 အတွက် Google Camera ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
2.2 Android 7.0 အတွက် Google Camera ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
2.3 Android 6.0 အတွက် Google Camera ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
2.4 Android 4.0 အတွက် Android 5.1 အတွက် Google Camera ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
ကျွန်ုပ်၏ Android တွင်ဂူဂဲလ်ကင်မရာကိုအဘယ် apk တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ကျွန်တော်ဒီ post နဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာမင်းကိုငါပြောခဲ့တာတွေကိုနားမလည်နိုင်အောင်ပါပဲ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်ကင်မရာကိုတရား ၀ င်ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးမှတရားဝင်ကူးယူ။ မရပါဒီ Android လောကမှာအရာအားလုံးဒါမှမဟုတ်အားလုံးနီးပါးမှာအဖြေတစ်ခုရှိပေမယ့်ဒီနေ့ apk ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသော application repository မှတိုက်ရိုက် download လုပ်ခြင်းဖြင့်မှန်ကန်သော version ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။ APK ကိုကြေးမုံ.
သင်၏ Android အရ APK Google Camera ကို Download လုပ်ပါ
Android 7.1 အတွက် Google Camera ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
Android 4.2.035.141213305 နှင့် 7.1-bit version များအတွက် Google Camera 32
Android 4.2.035.141213305 နှင့် 7.1-bit version များအတွက် Google Camera 64
Android 7.0 အတွက် Google Camera ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
Android 4.1.006.135988111 7.0 နှင့် 32 bits အတွက် Google Camera 64
Android 6.0 အတွက် Google Camera ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
Android 3.2.045 6.0 bits အတွက် Google Camera 32
Android 3.2.045 6.0 bits အတွက် Google Camera 64
Android 4.0 အတွက် Android 5.1 အတွက် Google Camera ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
Android 2.7.010 နှင့်အထက် 4.4 and 32 bits အတွက် Google Camera 64
မင်းတို့ဘယ်လိုမြင်လဲ၊ ငါဒီ post ကိုစတင်လိုက်တဲ့ပူးတွဲဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်၊ မင်းလုပ်ရမှာပေါ့ သင်၏ Android ဗားရှင်းနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သော Google ကင်မရာ၏ apk ကို download လုပ်ပါ သင်၏ Android terminal ၏ဗိသုကာပညာအရ၎င်းကို download လုပ်ထားသော apk ကိုနှိပ်သကဲ့သို့၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်လွယ်ကူသည်၊ ဆက်တင်များ / လုံခြုံရေး, ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးပြင်ပရှိအပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုမည့်ရွေးစရာတစ်ခုဖြစ်သည် မသိသောမူလအစ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » [APK] ဂူဂဲလ်ကင်မရာကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းနည်း။ (Play စတိုးတွင်မရရှိနိုင်ပါ)
cyanogenmod4နှင့် nexus 6.0.1 တွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်လိုက်ပြီး၎င်းကိုဗွီဒီယိုပေါ်တွင်တင်လိုက်သောအခါ၊ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သတင်းစကားတစ်ခုပေါ်လာသည် (ကင်မရာအမှား၊ ကင်မရာနှင့်ဆက်သွယ်မှုမရနိုင်ပါ။ တိုင်ကြားချက် .. လျစ်လျူရှုပါ)
Cristian Nuñez Tosetto ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ Android4ပါတဲ့ Moto G 6.0.1 plus ရှိတယ်၊ 6.0-bit version 64 နဲ့အဆင်မပြေဘူး။ 32-bit က Frederik နဲ့တူတယ်။
Cristian Nuñez Tosetto အားပြန်ပြောပါ
Manuel Marmol Moreno ဟုသူကပြောသည်
Photosfere (သို့) Panorama ကိုကျွန်တော်မတွေ့ပါဘူး။ ဗီဒီယိုဒါမှမဟုတ်မြင်ကွင်းကိုပြောင်းချင်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတဲ့ menu တစ်ခုပါ။ Elephone P8000 နဲ့အတူပုံမှန်အားဖြင့် android 5.1 နဲ့အတူအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
Manuel Marmol Moreno အားပြန်ပြောပါ
Adolfo Aaron ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Android ဗားရှင်း 4.4,2 ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဗားရှင်း 2.7.010 ကိုထည့်သွင်းရပါမည်၊ ကျွန်ုပ်ဖတ်နေသော်လည်းမည်သည့်နေရာတွင် download ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ
virtual assistant Bixby နှင့် Samsung Pay Mini တို့သည် Samsung ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပေါ်လာသည်